Medeshi: Madaxweynaha JML,ayaa Caawa lashiray Culima aw Diinta Lixda gobol ee Somaliland (Sawirro)
Madaxweynaha JML,ayaa Caawa lashiray Culima aw Diinta Lixda gobol ee Somaliland (Sawirro)
(Medeshi)-Madaxweynaha JSL, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Silaanyo) ayaa caawa kulan Afur iyo Casho sharaf ah la qaatay Culimo aw diinka Reer Somaliland oo ka kala yimid 6-da Gobol ee Somaliland.
kulankan oo ku qabsoomay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyada Somaliland waxa uu ahaa kulan ay madaxweynaha iyo Culimo aw diinku ay yeesheen, kaas oo la xidhiidha is xog-waraysi iyo sidii ay culimado aw diinka Somaliland u xoojin lahaayeen nabadgelyada, ee ay awalba caadada iyo dhaqanka u ahayd culimada una ilaalin jireen nabadgelyada.
Donate for the education of the Somali children in Kingston Kulankaa is xog-waraysiga ah, ka dib waxa Culimada hadal kooban oo mahadnaq iyo dardaaran u jeediyey madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland oo uga mahadnaqay culimo aw diinka sida qiimaha badan ee ay u soo ajiibeen kulankan, isaga oo madaxweynuhu culimo aw diinka xog-waran ka siiyey xaalada guud ee nabadgelyada dalka iyo doorka ay ku leyihiin ka culimo ahaan.
Kulankan waxa madaxweynaha ku wehelinaayey xubno ka mida golihiisa wasiirada.
Cabdilaahi Maxamed Daahir
Photos by keyse faarax